INkantolo YaseRussia Isisekelile Isigwebo Esinikezwe Abafowethu Ababili Nodadewethu Ababili
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Estonia Isi-Iban Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Oromo Isi-Ukraine IsiBhunu IsiBulgaria IsiCatalan IsiChewa IsiChiyao IsiCreole SaseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFiji IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHausa IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiMyanmar IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPolishi IsiPutukezi IsiPutukezi (SasePortugal) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiCanton (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiCanton (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiThai IsiTonga (SaseMalawi) IsiTumbuka IsiTurkey IsiVietnam IsiYoruba IsiZulu ULimi Lwezandla LwaseBrazil
Ukusuka kwesobunxele kuya kwesokudla: oDadewethu uSilaeva noShamsheva kanye naBafowethu uKhokhlov noZhinzhikov besenkantolo ngo-Okthoba 28, 2020
Ngo-Okthoba 28, 2020, iNkantolo Yesifunda YaseBryansk isisekelile isigwebo esinikezwe uMfoweth’ uVladimir Khokhlov no-Eduard Zhinzhikov kanye noDadeweth’ uTatyana Shamsheva no-Olga Silaeva. Izigwebo zabo bezisukela kwesiwunyaka kuya onyakeni nezinyanga ezintathu bedonsa ejele. Nokho, ngenxa yokuthi baqale badonsa esitokisini ngaphambi kokuqulwa kwecala labo, akuzange kudingeke baphinde badonse isigwebo esengeziwe ejele. Ngenxa yesinqumo sanamuhla, laba bafowethu nodadewethu sebenerekhodi lokuba yizephulamthetho ezalahlwa yicala. Noma kunjalo, bajabule ngokukhululwa kwabo. Abashushisi abanayo imvume yokufaka isicelo sesigwebo esiqine kakhulu kunalesi.
Ngaphambi kokuba bagwetshwe, abafowethu base bedonse izinsuku ezingu-316 esitokisini kanti odadewethu bona ezingu-245. Ngemva kokukhululwa, odadewethu kwaxoxwa nabo engxoxweni eyayizovela eMbikweni WeNdikimba Ebusayo Ka-2020 #5. Baveza ukuthi ukuthandaza, ukufunda iBhayibheli nokulondoloza umoya wokubonga kwabasiza bakhuthazela ngenjabulo.
Thumelela Thumelela INkantolo YaseRussia Isisekelile Isigwebo Esinikezwe Abafowethu Ababili Nodadewethu Ababili